» च्याउका यस्ता छन् फाइदा र नोक्सानी
च्याउका यस्ता छन् फाइदा र नोक्सानी
१५ आश्विन २०७६, बुधबार ०६:१०
3/22/2013--Shelton, WA, USA Pioppini mushrooms (Agrocybe aegerita) from Fungi Perfecti. Paul Stamets, 57, is an American mycologist, author, and advocate of bioremediation and medicinal mushrooms and owner of Fungi Perfecti,afamily run business that specializes in making gourmet and medicinal mushrooms. ©2013 Stuart Isett. All rights reserved.
च्याउ औषधीय गुणहरूले भरिएको खाद्यपदार्थ हो । यसमा अमिनो एसिड, खनिज लवण र भिटामिन जस्ता तत्त्व पाइन्छन् । यसमा ३५ प्रतिशतसम्म प्रोटीन हुन्छ जुन बोटबिरुवामा पाइने प्रोटीनभन्दा धेरै हो । च्याउले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्छ । च्याउको परिकार शाकाहारी र मांसाहारी दुवैले उत्तिकै रुचाउँछन् । तर च्याउका केही बेफाइदा पनि छन् । यहाँ हामी त्यसको चर्चा गर्नेछौं । पहिला फाइदाकै कुरा गरौं ।
मोटोपन हटाउन चाहने व्यक्तिहरूले प्रोटीनयुक्त आहार लिनुपर्छ र च्याउमा भरपूर प्रोटीन हुन्छ । तौल घटाउनका लागि मशरूम राम्रो विकल्प हो ।
च्याउ एक प्राकृतिक एन्टीबायोटिक हो । यसले माइक्रोबियल र फंगल संक्रमणलाई हटाउँछ । यसमा भएको एन्टीअक्सिडेन्टले शरीरलाई हानि गर्ने फ्री –याडिकलबाट बचाउँछ । अनि शरीरका कोशिकाहरूको मर्मत गर्न पनि यो सहयोगी हुन्छ ।
च्याउमा भएको बीटा ग्लाइसिन र लिनोलिक एसिडले क्यान्सरबाट बचाउन मद्दत गर्छन् । यसमा भएका काइटिन, लायसिन र प्रोटीनले शरीरमा ट्युमर बन्न दिँदैनन् ।
च्याउमा भिटामिन बी पाइन्छ । यसले भोजनलाई ग्लुकोसमा परिणत गरेर ऊर्जा उत्पन्न गर्छ र भिटामिन बी२ र भिटामिन बी३ ले मेटाबोलिजमलाई राम्रो बनाउँछ ।
मुटु राम्रो बनाउन
च्याउमा भएका एन्जाइमहरूले कोलेस्ट्रोल स्तर घटाउँछन् र यिनमा भएका पोषक तत्त्वले स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्छन् ।
कुपोषणबाट बालबालिकालाई बचाउनका लागि च्याउ खान दिनु ठीक हुन्छ । यो गर्भावस्थादेखि वृद्धअवस्थासम्मका लागि उपयुक्त आहार हो ।
च्याउमा भिटामिन, फाइबर र मिनरलहरू हुन्छन् अनि बोसो, कार्बोहाइड्रेट्स र सुगर हुँदैन । त्यसैले मधुमेहका रोगीले यसको सेवन गर्नु ठीक हुन्छ । यसले इन्सुलिन निर्माणमा सहायता गर्छ ।
पेटको समस्याबाट मुक्ति
फाइबररहित आहार लिँदा अपच र कब्जियतको समस्या हुन्छ तर ताजा च्याउ खाँदा यस्ता समस्याहरू हट्छन् किनकि च्याउमा फाइबर हुन्छ ।
च्याउ रक्ताल्पता हटाउनका लागि राम्रो विकल्प हो किनकि यसमा फोलिक एसिड प्रचुर मात्रामा हुन्छ । यसमा भएको फलाम र फोलिक एसिडले हेमोग्लोबिनको स्तर सामान्य राख्छन् । यसबाट रक्ताल्पता हट्छ ।
सामान्यतया च्याउले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्छ तर सही च्याउ खाइएन भने अनेकौं रोग लाग्छ । धेरै च्याउ खायो भने एलर्जी हुन्छ ।
अनि च्याउका केही प्रजातिहरू विषालु हुन्छन् । यस्ता विषालु र कच्चा च्याउ खाँदा एलर्जी, दम, उल्टी, मतिभ्रम, बेहोशी र वाकवाक लाग्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले च्याउ किन्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
जहिले पनि ताजा मशरूम खानुपर्छ । पुरानो र बासी च्याउले फूड पोइजनिङ गराउँछ । शिशुहरू र गर्भवती महिलाहरूलाई च्याउ खान दिनुहुँदैन ।